Beesha Absame oo beelaha kale ee soomaaliyeed ugu baaqdey inay garab istaagaan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab. | Halganka Online
Beesha Absame oo beelaha kale ee soomaaliyeed ugu baaqdey inay garab istaagaan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Posted on Maarso 16, 2010 by halganka
Suldaan C/qaadir khaliif Macalim oo kamid ah Salaadiinta beesha Absame ee gobolada jubooyinka ayaa ugu baaqey beelaha soomaaliyeed inay garab istagaan Xarakada Mujaahidiinta islamarkaana ay siiyaan taageeradooda ah sidii dalka soomaaliya loogu xukumi lahaa shareecada islaamka.
Suldaan C/qaadir Khaliif ayaa si gaar ah ula Hadley beelaha dega gobolada jubooyinka wuxuuna ku tartansiiyey inay u tartamaan kheyrka iyo u adeegidda diinta Alle isagoona xusey in beesha Absame ay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin beyco kula gashey in si wadajir ah loo difaaco diinta islaamka.
beelaha soomaaliyeed waxaan leeyahey beesha absame oo kale sameeya oo kheyrka aan u tartan oo hadaad naga dheereysaana waaan idin qireynaa hadii aan idinkaga dheereynana noo qira inshaa’alaah u saan ayaan leeyahey”.
Sidoo kale Suldaanka ayaa xusey inay wadaan uruurinta iyo isku dubaridka ciidamo ka bar bar dagaalama Xarakada Shabaabul mujaahidiin isagoona hadalkiisa intaa kusii darey inay kormeero kusoo mareen qeybo ka tirsan wilaayaadka baay iyo jubooyinka waxaana ujeedka kormeerkaasi uu ku sheegey sidii loo odayaasha iyo waxgaradka beelaha kala duwan ee soomaaliyeed loo fahamsiin lahaa inay u istaagaan difaaca shareecada islaamka ee ka hirgashey deegaanadooda.
Beesha Absame ayaa dhawaan waxey mubaayaco kula gashey Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab sidii si wada jir ah la isaga kaashan lahaa difaaca diinta islaamka iyo ka hirgelinta shareecada islaamka ee deegnaada ay beeshaasi degto
« Sheekh Mukhtaar C/raxmaan Abuu Zubeyr oo Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ugu baaqey inay sabarka badiyaan si guusha loo hanto (+Cod). Mooryaan Xeeffow oo beeniyey in uu waxka saxiixay wadahadaladii Itoobiya »